မောဟမျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း၏ ရာဇ၀င် (၈ – ဇာတ်သိမ်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မောဟမျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း၏ ရာဇ၀င် (၈ – ဇာတ်သိမ်း)
မောဟမျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း၏ ရာဇ၀င် (၈ – ဇာတ်သိမ်း)
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Oct 8, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary | 34 comments
၀မ်းမသာနိုင်သေး။ လိုရင်းကို မေးရသေးသည်။
“စည်သူတို့တွေလည်း ပါကြတယ်..စည်သူက လေးဘာသာ…မြင့်မိုရ်က နှစ်ဘာသာ…ကျန်တာတွေလည်း ပါကြပါတယ်..”
မတတ်နိုင်တော့။ သိချင်သည်ကို တိုက်ရိုက်သာ မေးလိုက်တော့သည်။
စိတ်ထဲက အော်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ချက်ချင်းပင် အမေ့ဆီပြေးသွားပြီး ခပ်တိုးတိုးပြောလိုက်သည်။
“အမေ..အမေ..သမီး ငါးလုံးပါတယ်သိလား..နှင်းဆီက လေးလုံးပဲပါတယ်…ဟိဟိ..ပျော်လိုက်တာ..သမီး နိုင်ပြီသိလား…”
“ဟဲ့..တိုးတိုး..တိုးတိုး..သူများကြားသွားရင် မကောင်းဘူး…သေချာလို့လား သမီးရယ်…မျက်စိနဲ့တွေ့မှ ယုံကြတာပေါ့…”
“ဘဘ ကိုယ်တိုင်ပြောတာ..ဘဘနဲ့တွေ့တာ..ဟုတ်မှာပါ အမေရဲ့..”
“အောင်စာရင်းထွက်တဲ့အထိ စောင့်ပါဦး သမီးရယ်..”
ဇဝေဇ၀ါစိတ်များ ဖြစ်သွားပြန်သည်။ ထိုအချိန်တွင် တွေ့လိုက်ရသည်က ၀ဏ္ဏ နှင့် စည်သူ။
“အေး..ငါလည်း ကြားတာပဲ..သိပ်မယုံသေးလို့…ဘာမပါတာလဲ မသိဘူး..နင် ကျောင်းထဲဝင်ကြည့်ပေးပါလား..ဟို..ခြံစည်းရိုးပေါ်က ကျော်သွားလို့ရတယ်…”
ခဏကြာတော့ စည်သူ ပြန်ခုန်ဆင်းလာသည်။
“ဟဲ့..နင် ငါးလုံးဆိုတာ ဟုတ်တယ်..ငါလည်း လေးလုံးတဲ့..”
“အဲဒါတော့ မသိဘူး..အတန်းပိုင်ဆရာမကိုယ်တိုင်ပြောလိုက်တာ..ငါကြည့်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး.. အထဲမှာက ကပ်ပြီးသွားပြီ..မိုးလင်းမှ ကျောင်းတံခါးဖွင့်မယ်တဲ့..စာရွက်တွေပြဲမှာစိုးလို့တဲ့..”
“လာပါ..အမေရယ်..ပြန်ရအောင်..သေချာပါတယ်…တစ်ကိုယ်လုံးလည်း စိုရွှဲနေပြီ..အဖွားနဲ့အဖေ့ကို ပြန်ပြောရအောင်…မိုးလင်းမှ တစ်ခါလာကြည့်ကြတာပေါ့…”
ထိုနေ့ကတော့ ၀တီ့ဘ၀တွင် အပျော်ဆုံးနေ့ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ တစ်မြို့လုံးတွင် တစ်ဦးတည်းသော ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်ဖြစ်ခဲ့သည့်အပြင် အနှစ်နှစ်အလလက ရာဇ၀င်ကြွေးကို ဆပ်ခွင့်ရခဲ့သည့်အတွက်ပင်ဖြစ်သည်။ နှင်းဆီတို့အိမ်ကတော့ တိတ်ဆိတ်လွန်းလှပေသည်။ ၀တီကတော့ အနည်းငယ်အားနာစိတ်ဖြင့် နှင်းဆီအိမ်ရှေ့ကပင် မဖြတ်ဖြစ်ခဲ့။
နောက်ပိုင်းတွင် နှင်းဆီ၏ သတင်းကို လုံးဝမကြားရတော့ပေ။ ဆုပေးပွဲများတွင်လည်း မတွေ့ရ။ မြို့ထဲတွင်လည်း မတွေ့ရ။ နှင်းဆီသာမက နှင်းဆီ၏ မိသားစုနှင့်ပင် မျက်နှာချင်း မဆိုင်ဖြစ်ခဲ့ပေ။
တက္ကသိုလ်တွေတက်ကြသည့်အခါ နှင်းဆီ၏ ကျောင်းသတင်းကို ကြားမိ၏။ သတင်းကြားရုံကလွဲ၍ အဆက်အသွယ်များ ပြတ်တောက်ခဲ့ကြသည်။
“မတွေ့ပါဘူးဟာ…နင်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ..သူနဲ့ငါကတော့ သေခန်းပြတ်ပဲ ဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်…သူကလည်း ငါခေါ်မှ ခေါ်မှာ..ငါကလည်း သူခေါ်မှခေါ်မှာ..ဘယ်သူကမှလည်း စခေါ်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူး…ဒီတစ်သက်တော့ ဒီလိုပဲ ဖြစ်တော့မှာပါ…”
“နင်တို့ကလည်းနော်…ဒီလောက်ချစ်ခဲ့ကြတာကို… အခုလို ဖြစ်သွားတာ ငါဖြင့် စိတ်တောင်မကောင်းဘူး..”
သီရိက ပြောလာတော့ ၀တီလည်း သတိရသွားသည်။ ၀တီကတော့ နိုင်ခဲ့သူမို့ ဘာမှမဖြစ်တော့သော်လည်း နှင်းဆီဘက်ကတော့ နာကျည်းနေမည်ထင်သည်။
အချိန်တွေကား တရွေ့ရွေ့နှင့် ကုန်ဆုံးသွားသည်။ နှင်းဆီကိုလည်း တစ်ခါတစ်လေ သတိရသည်မှ လွဲ၍ မည်သည့်အဆက်အသွယ်မျှမရ။ ကျောင်းပြီးသွားသည်ကိုတော့ သိရသည်။
တစ်ခုသောနေ့တွင် ၀တီနှင့် တက္ကသိုလ်အတူတူတက်ခဲ့သော မေသူက မေးလာခဲ့သည်။
“ဟဲ့..နင်တို့မြို့က နှင်းဆီမေဆိုတာကို သိလား..”
“အေး..ငါထင်တော့ထင်တယ်…နင်ပြောတဲ့တစ်ယောက် ဖြစ်မယ်လို့.. ငါနဲ့ အတူတူ MBA တစ်ခန်းတည်းသိလား… ငါ့တက္ကသိုလ်ကို ပြောပြတော့ ၀တီခင့်ကို သိလားလို့ မေးတယ်…ငါလည်း တစ်ခန်းတည်းသူငယ်ချင်းလို့ ပြောလိုက်တယ်…”
“ဟုတ်လား..ဒါတဆို နင်နဲ့ အတူတူပေါ့..သူက နည်းနည်း ကလေးဆန်တယ်သိလား… ခင်ဖို့တော့ ကောင်းမှာပါ…ပြောင်းလဲလောက်ပြီလည်း ထင်ပါတယ်..”
ကံတရားကား ဆန်းကြယ်လှပေသည်။ ၀တီနှင့် အလုပ်တစ်ဌာနတည်းတွင် ဘေးချင်းကပ်လုပ်နေသော သူငယ်ချင်းဝဏ္ဏက အံသြစွာပြောလာခဲ့သည်။
“၀တီ…ဒီမှာ လာကြည့်စမ်း… နှင်းဆီမေ တဲ့.. ငါ့ကို facebook မှာ add ထားတယ်… နာမည်တူ မရှိလောက်ဘူးတော့ ထင်တာပဲ…”
“အဲ..ဟုတ်ပါ့..ဟုတ်လောက်တယ်ဟဲ့..နေဦး..ညနေကျရင် ငါ အင်တာနက်ဆိုင် သွားကြည့်လိုက်မယ်…အခုက မေးလ်ထဲကဆိုတော့ ဖွင့်လို့မရဘူးမို့လား…. ငါတို့စက်တွေ facebook မှ မရတာ…”
ဟုတ်ပါသည်။ ၀ဏ္ဏ နှင့် facebook တွင် သူငယ်ချင်းဖြစ်နေသူသည် ၀တီ၏ နှင်းဆီ ဖြစ်ပါသည်။ ချီတုံချတုံဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် ၀တီလည်း friend request ပို့ခဲ့လိုက်သည်။
နောက်နေ့တွင်တော့ ၀တီ၏ request ကို နှင်းဆီက လက်ခံထားခဲ့သည်။ ရင်လည်းခုန်ပြီး ပျော်လည်းပျော်နေခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် ၀တီတို့ ကျောင်းသားဘ၀က တစ်ခန်းလုံးစုရိုက်ထားသော ပုံတွင် နှင်းဆီကို tag လုပ်ပေးလိုက်သည်။
မကြာမီ နှင်းဆီထံမှ message ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
“သူငယ်ချင်း…ဓာတ်ပုံကို tag လုပ်ပေးတာ ကျေးဇူးနော်…နင်နေကောင်းလား…ဘာတွေ လုပ်နေလဲ…အဆင်ပြေလား..ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်နော် သူငယ်ချင်း..တာ့တာ”
၀တီတစ်ယောက် ပျော်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း။ ၀မ်းသာစွာနှင့် ၀ဏ္ဏကို ပြောမိတော့ ၀ဏ္ဏ၏ ကောင်းချီးပေးသံကို ကြားရသည်။
“ကြည့်လို့ကို မရတော့ဘူး..မုန်းတော့လည်း သူတို့..ချစ်တော့လည်း သူတို့..မသိရင် အနှစ်နှစ်အလလ ကွဲနေတဲ့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ပြန်ဆက်နေတာ ကျနေတာပဲ..”
“ဘာဖြစ်လဲဟ..ရည်းစားဟောင်းထက်တောင် ပိုချစ်သေးတယ်…. နင်မနာလိုမဖြစ်နဲ့..”
“အေးပါ..ချစ် ချစ်..ဘယ်အချက် ဘာသံတွေ ပြန်ကြားရဦးမလဲ မသိဘူး…”
“ဘာသံမှ မကြားရဘူး…ငါတို့က တည်ငြိမ်သွားပြီ နော..ငါ ပြန်ရေးလိုက်ဦးမယ်..”
“နှင်းဆီရေ..နင့်စာကိုရတာ ငါတော်တော်ပျော်မိတယ်..နင်ရော နေကောင်းရဲ့လား..ငါလည်း အဆင်ပြေပါတယ်…ငါကလေ နင် ငါ့ကို မုန်းနေမယ် ထင်တာ..မတွေ့တာလည်း အရမ်းကြာပြီနော်…မပြန်ဖြစ်ဘူးလား..ကောင်းသောနေ့ပါ သူငယ်ချင်း”
“ဘာလို့ မုန်းရမှာလဲ ၀တီရယ်..ငါတို့လည်း အသက်တွေကြီးလာပြီပဲ..ကလေးဘ၀က ဆိုးခဲ့တာတွေပါ…နင့်အကြောင်းကို မေသူ့ဆီမှာ အမြဲမေးဖြစ်တယ်…ငါတို့ အားရင် တွေ့ကြမယ်လေ..ငါ့ဖုန်းနံပါတ်ယူထားလိုက်နော်..”
သည်လိုနှင့် ဖုန်းနံပါတ်တွေ လဲကြရင်း..gtalk account တွေ ပေးကြရင်းဖြင့် ၀တီတို့နှစ်ယောက် စကားတွေပြောဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ သူငယ်ချင်းမေသူ၏ ကောင်းမှုဖြင့် သုံးယောက်သား ဆုံဖြစ်ကြသည်။ ကလေးဘ၀က အကြောင်းတွေပြန်ပြောကြ၊ သူ့သတင်းကိုယ့်သတင်းတွေပြောကြဖြင့် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ပြန်ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ယခုတော့ ကိုယ့်ဘ၀နှင့်ကိုယ်၊ ကိုယ့်ရုန်းကန်မှုနှင့်ကိုယ်၊ အလုပ်အကိုင်ကိုယ်စီနှင့် သီးခြားဘ၀တစ်ခုစီတွင် ပျော်မွေ့နေလျက်။
၀တီ၏ ဘ၀တွင်တော့ နှင်းဆီသည် အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်မှာ ငြင်း၍မရချေ။ ထိုနည်းအတူ နှင်းဆီ၏ ဘ၀တွင်လည်း ၀တီအကြောင်းကို ချန်ထားခဲ့၍မရချေ။ ကလေးဘ၀က အာဃာတများသည် ယခုအချိန်တွင်တော့ အမှတ်တရများအဖြစ်သာ ကျန်ရစ်ခဲ့တော့သည်။ နှင်းဆီ နှင့် ၀တီဟူသော မိန်းကလေးနှစ်ယောက် ရပ်တည်ခဲ့သော မောဟမျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းသည် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရန် မဖြစ်နိုင်သော်လည်း ယခုအချိန်တွင်တော့ မောဟများကုန်ဆုံးပြီး တည်ငြိမ်သော ဘ၀မျဉ်းပြိုင်များအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည် ဖြစ်ပေတော့သည်။ ။
ကဲ..ဇာတ်သိမ်းပိုင်း တင်ပေးလိုက်ပါပြီရှင့်..ဇာတ်သိမ်းမှာ အကုန်လုံးကို ဖတ်ပြီး မန့်မည်ဆိုသူများ မန့်လို့ရပြီဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်ရှင့်.. ၂ ကျပ်ပေးတော်မူကြပါကုန်.. (နောက်ထှာနော်..)
အစအဆုံးစောင့်ပြီး ဖတ်ပေးကြပါသော… ပြီးမှအကုန်လုံးကို ဖတ်မည်ဆိုသော ရွာသူရွာသားအပေါင်းကို လုံမလေးမှ ကျေးဇူးအထူးပင် တင်ရှိပါတယ်ရှင့်..
အဆုံးထိ အားပေးသွားပါတယ်လို့ လုံမရေ…
တော်သေးတာပေါ့ အာဃာတ တွေနဲ့ ဇတ်လမ်းပြတ်မသွားလို့!
လောကမှာ အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်မှုက “မနေ့က ကိုယ်” နဲ့ “ဒီနေ့ ကိုယ်” လို့ ယူဆမိပါကြောင်း……
ဇာတ်လမ်းအရှည်ကြီးကို စိတ်ဝင်စားအောင်ရေးနိုင်လို့ ချီးကျူးပါတယ် လုံမရေ။
ကဲ……..ပြီးပြီဆိုတော့ အစကနေပြန်ဖတ်မယ် ..ဖတ်ပြီးမှ ပြန်လာမန့်မယ်နော်..:hee:
ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မွန်လေးက ဒေါက်တာမလေးပေါ့ကွယ်
မောင်ပေ့ရဲ့ ဟိုက်ပါလဗ် အနေအထားလေးကို အမြန်ဆုံးကုသပေးပါနော
Happy Ending လေးကို ခေတ်နဲ့ အညီ FB နဲ့ သိမ်းပေးထားတာ ချီးကျူးပါတယ်ကွယ်။
အစကနေ အဆုံးအထိ အားပေးသွားပါတယ် …
နှင်းဆီလိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိခဲ့တာ ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ် … အပြိုင်အဆိုင်ရှိမှ တိုးတက်တာ ….
လုံမလေးရေ အခုတော့ ပြီးပါပြီပေါ့၊ ခင်ခတစ်ယောက်လည်း အလုပ်ရပြီ facebook မှာ ၀တီ နဲ့ နှင်းဆီ ရှာပြီး friend request ပို့လိုက်မယ်ဗျာ။
တော် သေးတယ် .. ချစ်ချစ် မလုကြလို့ ..
ဒီလောက်အရှည်ကြီးကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရေးသွားတဲ့ မွန်မွန်ရဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို လေးလေးစားစားချီးကျူးပါတယ် ။
လူ့သဘာဝ ၊ လူ့ စရိုက်ကိုဖေါ်ပြတဲ့ ဇတ်အိမ်ဖြစ်တာရယ် ….လက်ရှိ ခေတ်ကာလ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား
တွေနဲ့ ကျောင်းတွေရဲ့  အခြေအနေကို ထင်ဟတ်စေခဲ့လို့ ဖတ်သူကိုအကျိုး ပြုစေခဲ့တာအမှန်ပါ ။
လက်ရာကောင်းလှတဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်အဖြစ် မှတ်တန်းတင်ကျန်ရစ်ခဲ့မှာပါ ။
မွန်မွန်ရေ ရင့်ကျက်လာတဲ့ အရွယ်မှာ ပြေလည်မှုရသွားတယ် ဆိုတော့ ၀မ်းသာစရာပေါ့။
ကျမကတော့ ကျောင်းသက်တလျှောက်( နှစ် ၂၀ နီးပါး) ခင်မင်စွာ ပေါင်းသင်းလာတဲ့ အေးတူပူမျှ သူငယ်ချင်းကို ရင့်ကျက်လာတဲ့ အရွယ်ရောက်မှ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ တွေးမိတိုင်း ခုထိစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတုန်းပဲ။
နောက်ဆုံးတော့လည်း မင်းသမီးဘဲနိုင်သွားတာဘဲ….။ နှင်းဆီလေး သနားစရာ…………….။
တောက်လျှောက် အားပေးလာပါတယ် သမီးရေ။
Happy Ending မို့ အင်မတန် ကြည်နူး သွားပါတယ်။
ကိုယ့်ငယ်ဘဝ ကိုတောင် လွမ်းသွားတယ်။
ဒါထက် အဲဒါ မွန်မွန် ရဲ့ ဇာတ်လမ်းလား။
အရီး ပြန် အစ် အလှည့်။ :harr:
ဇာတ်သိမ်း Version 2,3,4 တွေ… ရေးစေလိုပါတယ်ဗျို့…
Downer ending, Tragic ending, Inconclusive ending, Disturbing ending, Anticlimactic ending, Bad ending လေးတွေနဲ့ပေါ့..
၀တီနဲ့ နှင်းဇီ တို့
ဖားသက်ပြင်း ဆိုတဲ့ အမျိုးကောင်းသားလေးကို
လုကြတဲ့ ဇာတ် မောဟမြင်းပြိုင် ထူးပွိုင့်ဇီးဒိုး ဆိုပီး ရေးပါအုံးလို့
တောင်းဆိုပါရဇီ ဗျား …
သများပြောသားပဲ ၀တီ ငါးလုံးပါဆို………..
အဲဒီလို ၀တီနဲ.နှင်းဆီ ပြန်လည်ဆုံတွေကြပြီး မောဟမျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း ရာဇ၀င် ပြန်လည်စတင်ပြန်တော့… သူတို.နှစ်ယောက် ပြိုင်စရာ တစ်ခုပေါ်လာပြန်ပါတယ်.. အဲဒါကတော့ ဂဇတ်ရွာ ထဲက ပုပုချောချောကောင်လေး တစ်ယောက်ကို အပြိုင် ပိုးစိုးပက်စက် ကြိုက်ကြ လုကြ တဲ့ အကြောင်း……………………….. ခွီးခွီးခွီး…… :hee:
ခုတော့လည်း မောဟမျဉ်းပြိုင် ကနေ ဘ၀မျဉ်းပြိုင် အနေနဲ့ ဆက်လက် တည်ရှိနေပါတယ်တဲ့…
စ. လည်.. ဆုံး အာပေးသွားတယ်နော်…..
ဇာတ်သိမ်းလေးကို အားပေးပြီး ကျေနပ်သွားပါတယ် … အရေးအသားလေးကတော့ ကောင်းမှကောင်း ညီမမွန်မွန်ကတော့ …. အံချာတုံးနဲ့များကွာပ …
ဒါနဲ့စကားအတင်းစပ် လယ်ထွန်Zဆိုတဲ့ လူချီးနဲ့ ငပုတိုက်ကို ယောင်လို့တောင် အပြိုင်အဆိုင်ဇာတ်လမ်းထဲ ထည့်မရေးမိစေနဲ့ သဗွတ်အူထက်ဆိုး သွားမယ် …. ငပုမ နတ်ပန်သကပန်သုတ်ကြီး … ခစ်ခစ်
အခုချိန်မှာတော့ မနေ့ကကိုယ် နဲ့ ဒီနေ့ကိုယ် ဘယ်သူ အပျင်းပိုထူလဲ ဖြစ်နေတယ်…
ဒေါက်တာမဖြစ်ပါဘူးရှင်..အဲဒီနှစ်က ဆေးမှတ်တွေ တအားမြင့်တာ.. လိုက်လို့ကို မမီဘူး…
အောင်စာရင်းထွက်တဲ့နေ့က ငိုချင်တယ်ဆိုတာ ပြောပြဦးနော်…
အဝေးကြီးမရှာနဲ့..၀တီ့ရဲ့ friend list ထဲမှာ နှင်းဆီ ရှိတယ်…
ချစ်ချစ် တော့ မလုပါဘူး.. နှင်းဆီက ချောတယ်.. ၀တီ ရှုံးလိမ့်မယ်..
ကွန်မန့်ကိုဖတ်ပြီး တကယ်ကို အားတက်မိပါတယ်ရှင်-
@မပုခ်ျ (မိပုနဲ့ မှားမှာစိုးလို့ ခွဲခေါ်တာ)
တကယ်တမ်းတော့ လွဲမှားတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းမှုအောက်က နှင်းဆီဘ၀က ပိုသနားဖို့ ကောင်းပါတယ်…
ဟီး…သမီးက ခရီယေးတစ် သိပ်မကောင်းဘူး အရီးရဲ့..
ဖတ်ပြီးတော့ ပိုဖျားချင်သွားတယ်.. (နေမကောင်းချင်ပါဘူးဆိုမှ)…
အရီးကို ပြောထားတဲ့ အတိုင်းပဲ…
နှစ်ယောက်စလုံးက ရဲတိုက် မကြိုက်ဘူးတဲ့.. ဟိဟိ
နှင်းဆီကို စာဖတ်ဝါသနာပါအောင် စည်းရုံးပြီး ရွာထဲကိုအရင်ဝင်ခိုင်းလိုက်ဦးမယ်..ပြီးတော့မှ အဲ့ဇာတ်လမ်းကို စကြတာပေါ့….
အစကနေ အဆုံးအထိ အားပေးလာတဲ့အတွက် တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မ…
သိတယ် မမ..သိတယ်… ပြီးရင် အတင်းဆက်ပြောမယ်နော်.. ဟိဟိ
မြန်မာပီပီပဲ ပြန်တည့်အဆင်ပြေသွားတဲ့ ဇာတ်သိမ်းလေးကို ကြိုက်ပါကြောင်း..
၀တီ့ဘက်ကနေ တိတ်တိတ်လေး အားပေးနေတာ.
နိုင်သွားမှပဲ ဟင်း ချနိုင်တယ်..
သဂျီးပြောတဲ့ ဗားရှင်းအသစ် ထပ်မျှော်နေပါ့မယ် နော်
ပညာရေး အောင်မြင်သူမို့ ဘ၀မှာလဲ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မ… ဆန္ဒပြုပေးတာအတွက် ထပ်ဆင့်ကျေးဇူး…
စ-ဆုံးအားပေးသွားတယ်နော်..ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ရပ်မှန်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေနေတာမကြာသေးတဲ့သူငယ်ချင်း သူ့အကြောင်းဖော်ကောင်လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြန်တင်းသွားမလားမသိ…
ရှူး..တိုးတိုး… တူက ဒီရွာကို လုံးဝမတိဘူး.. စာလည်း မဖတ်ဘူး..:P
ချောဒယ် ရှို. မိတ်ချက်ပေးပါလားကွယ်.
သများ ရင်ဒွေ ခုန်လွန်းလို့ဘာ.
အမ်ဘီအေ တက်တယ်ရှိုဒေါ့. တအား ချိတ်ဝင်ဇားတယ်ကွယ်.
အိုဘယ့် မခင်နှင်းဇီ လေးရယ်.
ပေါထားပီးဒါးလေ…တူဂ ရဲတိုက် ကြိုက်ဝူးလို့… :harr:
အရင်အပိုင်းတွေဖတ်တုန်းက ခံစားချက်နဲ့ ဇာတ်သိမ်းကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ခံစားချက်က လုံးဝကို ကွဲပြားသွားတယ်။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ခဲပေမယ့် တရုတ်ဇာတ်ကားတွေမှာ ဒါရိုက်တာက ဇာတ်သိမ်းကို ပိုင်တယ်။
သူပေးချင်တာကို ထိမိအောင် ပေးနိုင်တယ်။
ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွေကတော့ ကြည့်ပျော်ရှု့ပျော်လို့ပဲ မြင်မိတယ်။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ending လေး။ :hee:
ကွန်မန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော်.. ဆက်ကြိုးစားပါမယ်လို့…
လုံမလေးရေ နောက်ကျမှဖတ်ဖြစ်လို့ ဆော်တီးပါ အဲ ဆောရီး ပါနော်။
ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ရေးနိုင်လို့ အရမ်းကိုချီးကျူးမိပါရဲ့။ တို့များအဲ့လို ရေတတ်ချင်လိုက်တာ။
အပြိုင်အဆိုင်ရှိမှတိုးတတ်မယ်ဆိုပေမယ့် ပူတော့ပူလောင်တယ် လုံမ …
ဘ၀မျဉ်းပြိုင်ဆိုတာထက် ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဦးတည်သွားနေတဲ့ မျဉ်းလေးတွေဆိုရင်တော့ ပိုပြီးစိတ်အေးချမ်းမလားပဲ … ကိုယ့်အထင်ကိုယ်ပြောတာပါလေ …
ဒါထက် သဂျီးအဆိုကိုထောက်ခံပါတယ် .. နောက်ထပ် ဗားရှင်းလေးလည်းဖတ်ချင်သား … ဟီး ..
တကယ်တော့ ဘဝဟာ happy ending မဟုတ်ခဲ့ဘူး.. ending ပြီးမှ ဘဝက စတာ. ရှင်လျက်နဲ့ ဘဝသေအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ သူ့မိဘတွေကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား မသိတော့ဘူး.. ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းမှန်း သိနေတာတောင် ရင်ထဲမှာ တကယ်မချိဘူး..